के तपाईले कफी पिउने गर्नुहुन्छ?? यदि पिउने गर्नुहुन्छ भने एकपटक अवस्य हेर्नुस - Taja Khabar
एजेन्सी, १९ असोज । कफि स्वास्थका लागि निकै फाइदाजनक छ । यसमा पाइने कैफीनले शरीरमा ऊर्जाको सञ्चार गर्दछ ।
कफिको दैनिक सेवनले आलस्यता टाढा भाग्छ । दैनिक कफि सेवन गर्ने मानिसको स्वास्थमा कफिले धेरै नै सकरात्मक असर पार्छ । यसले शरीरको तौल, डायबेटिजलाई काम गर्ने, लिभरको सुरक्षा गर्ने, पाचन शक्तिमा सुधार गर्ने र केही प्रकारका क्यान्सरको प्रतिरक्षा गर्ने काममा पनि मद्दत पुर्‍याउँछ । साथै यसले मुटु रोगबाट पनि बचाउँछ । कफि स्वादमा जति मिठो हुन्छ यसको फाइदा पनि त्यति नै धेरै हुन्छ ।
बेलायतको द वर्ल्ड क्यान्सर रिसर्च फण्डले गरेको शोधमा कफिले सर्वाइकल लिवर क्यान्सरको खतरालाई कम गर्ने देखिएको छ । यद्यपि, यस शोधमा यी कुरालाई प्रमाणित गर्ने पर्याप्त प्रमाणहरु नभएको शोधमा संलग्न विज्ञहरु बताउँछन् । तर विज्ञहरुले दिनमा तीनपटकसम्म कफि सेवन गर्ने बानीले क्यान्सरको खतरालाई पचास प्रतिशत कम गर्ने बताएका छन् । कफिको सेवनले हेप्टोसेल्युलर कार्सिनोमा एचसीसीको खतरा पनि कम हुने बताइन्छ । यो एक आम प्रकारको लिवर क्यान्सर हो ।
कफिको सेवनले मुडलाई असल राखेर तनाव कम गर्छ । सियोल नेशनल युनिभर्सिटीद्वारा गरिएको एक शोधमा कफिमा पाइने तत्वले तनाव भगाउने बताइएको छ । यस शोधमा रातमा कफिको सेवनले राम्ररी निद्रा आउने पनि पाइएको छ ।
दमजस्तो श्वासको बिमारका लागि कफि लाभदायक हुने बताइएको छ । कफिमा पाइने कैफिन र थियोफायलिन नामका तत्वले दमबाट ग्रसित बिमारीहरुको स्वासको गतिलाई ठीक राख्छ । २०१२ मा प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदनको अनुसार नियमितरुपमा कफि सेवन गर्ने मानिसलाई पार्किंसन बिमारीको खतरा पनि कम हुन्छ ।
नेचर न्युरोसाइन्स नामक पत्रिकामा प्रकाशित एक रिपोर्टको अनुसार कफिको सेवनले मस्तिष्कको क्षमता पनि बढ्ने र स्मरणशक्ति बढाउनका लागि सहायक हुने उल्लेख छ ।
ब्लैक कफि स्वास्थका लागि सधै असल मानिन्छ । यसमा कैलोरीको मात्रा धेरै कम हुन्छ र यसमा कैल्शियम र पोटाशियम जस्ता पोषक तत्व पाइन्छ । मधुमेहका रोगीका लागि चिनी बिनाको ब्ल्याक कफि निकै फाइदाजनक हुन्छ ।
ग्रीन कफि कुनै फरक प्रकारको कफि हुँदैन । यो बन्नका लागि सामान्य कफिको बियाको प्रयोग गरिन्छ । कफिको बियालाई नभुटेपछि यो हरियो नै रहन्छ । यही बियाले ग्रीन कफि तयार हुन्छ । यस्ता बियामा विशेष किसिमका क्लोरोजेनिक एसिड हुन्छ जुन कफिको बियालाई भुट्दा नास भएर जान्छ । वैज्ञानिकले त्यो तत्व स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुने बताइएको छ ।
तर दिनमा तीन कपभन्दा धेरै कफिको सेवनले स्वास्थमा नकरात्मक असर पार्न सक्छ ।
रुघाखोकी, ज्वरो, घाँटी खसखस हुने वा दुख्ने, नाक चिलाउने, नाकबाट पानी बग्ने जस्ता समस्याबाट ग्रसित हुनु हुन्छ? यसरी जरैदेखि निर्मुल पार्नुहोस्